Ny fampiharana Widget ho an'ny OS X dia miharihary amin'ny tsy fisian'izy ireo | Avy amin'ny mac aho
Ny fampiharana miaraka amin'ny Widgets ho an'ny OS X dia miharihary amin'ny tsy fisian'izy ireo
Ny iray amin'ireo lohahevitra izay toa hadinon'i Apple tao amin'ny Mac App Store an'ny OS X dia ireo widgets misy. Tamin'ny fahatongavan'ny ivotoerana fampandrenesana ho an'ny OS X, mpampiasa maro no nieritreritra fa miaraka amin'ity foiben'ny fampandrenesana ity i Apple dia hanisy widget tsy misy farany ho an'ny foibe fampandrenesana ary tena tsy nanao izany.
Raha mijery mivantana ny magazay fampiharana Apple ho an'ny Mac isika dia tsy mahita afa-tsy fampiharana 24 izay manana ny widget misy azy ireo. Raha ny tena izy dia tsy ny rehetra no leson'i Apple amin'ity tranga ity, satria ny mpamorona sy ny rindranasa hampiasaina ao amin'ny foibe fampandrenesana dia toa tsy dia malalaka loatra koa, saingy miharihary fa io safidy io dia tsy araraotina tanteraka amin'ny OS X sy antenaina fa ny kinova manaraka dia afaka manararaotra kely kokoa ity fiasa ity.
Ny marina dia raha mijery ireo fampiharana 24 misy ao amin'ny Mac App Store isika dia somary fohy ihany. Marihina fa tsy ny rindranasa rehetra ho an'ny OS X dia misy ao amin'ny magazay an-tserasera Apple ary izany no antony itsoahana widget hafa bebe kokoa amintsika, fa tsy zavatra mahavariana ihany koa.
Ka na dia misy aza ny Widget Dashboard mbola ilaina ao amin'ny kinova OS X ankehitriny ary efa nampidirina tsara kokoa, Mbola mieritreritra aho fa ity ampahany amin'ny OS X-nay ity dia tsy maintsy hatsaraina amin'ireo andiany manaraka, samy avy amin'i Apple na avy amin'ireo mpamorona. Safidy fampiasana bebe kokoa ho an'ireo widgets ireo ary maro amin'izy ireo no mety hahaliana ny mpampiasa OS X maro, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Ny fampiharana miaraka amin'ny Widgets ho an'ny OS X dia miharihary amin'ny tsy fisian'izy ireo
Apple dia manakarama injeniera Google teo aloha miandraikitra ny fiara elektrika
Apple Maps izao dia mampiseho ny lalana fitaterana any Sacramento, Kalifornia